आज पुस पन्ध्र : बाहुनदेखि जनजातिसम्म पर्वैपर्व - Charchit Entertainment!
Home bjob आज पुस पन्ध्र : बाहुनदेखि जनजातिसम्म पर्वैपर्व
आज पुस पन्ध्र : बाहुनदेखि जनजातिसम्म पर्वैपर्व
१५ पुस, काठमाडौं । आज बुधबार मंसिर पूर्णिमा अर्थात् धान्य पूर्णिमाको दिन विभिन्न जातजातिका पर्वहरु परेका छन् । आज सुदूरपूर्वका किरातदेखि कर्णाली प्रदेशको विकट क्षेत्रका बासिन्दाले समेत एकैदिन आ-आफ्ना पर्वहरु मनाउँदैछन् ।
ज्योतिषीय हिसाबले मंसिर पूर्णिमाको त्यति धेरै महत्व रहेको पाइँदैन । तर, सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायणोन्मुख रहेकाले यही दिनदेखि दिन लामो र रात छोटो हुन्छ भन्ने तर्कको ज्योतिषीय आधार रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. माधवप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।
कृषिप्रधान मुलुकमा धान भित्र्याइसकेपछि फुर्सदिलो बनेका किसानहरुले पूर्णिमाको पवित्र दिन या रातमा विभिन्न नाच एवं पर्व मनाउन थालेका हुन् । पूर्णिमा आफैँमा पवित्र तिथि हो, फुर्सद भएपछि त्यही मंसिर पूर्णिमामा धेरैले चाडपर्व मनाउन थालेसँगै यसको महत्व त्यसैले बढाएको हुन सक्नेे तर्क भट्टराई गर्छन् ।
नेपालमा ल्होछार मनाउने थकाली, गुरुङ र तामाङहरूले तिब्बती लोसारमा केही परिमार्जन गरेका छन् । डा. गुरुङका अनुसार नेपाली मंगोल समुदायले मनाउने लोसारको गाई वर्गलाई तिब्बतमा गोरु वर्गको नामले चिनिन्छ ।
धान्य पूर्णिमालाई गण्डकी प्रदेशमा समेत विभिन्न जातिहरुको साझा पर्वको रुपमा मान्ने गरिन्छ । त्यसमध्ये पनि त्यहाँका मगर समुदायले भने जीवनसाथी रोज्ने पर्वको रूपमा यसलाई मनाउने गरेको डा. गुरुङ बताउँछन् ।
यसमा हात, खुट्टा र मुखको चाललाई बढी महत्व दिइन्छ । यसबाहेक राकम कर्णाली दैलेखको दुल्लुस्थित कर्णाली नदीको फाँटमा पनि यही दिन धान नाच नाच्ने गरिएको डा. गुरुङ बताउँछन् ।
नेवारको योमरी पुन्ही:
काठमाडौंका नेवारी समुदायको योमरीमा किन चुच्चो राखिन्छ ? यसको कारण धेरै योमरी बनाउनेहरूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । नेवारी संस्कृतिका जानकार एवं विनोदराज शर्मा यसले योमरी पुन्हीको दिनदेखि दिन लामो र रात छोटो हुन सुरु हुन्छ भन्ने संकेतका लागि चुच्चो बनाउने गरेको बताउँछन् ।
योमरीको शाब्दिक अर्थ ‘मन पराउने रोटी’ भन्ने हुन्छ । संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरूङ योमरीमा राखिने चुच्चो भागले नयाँ वर्ष योमरीको चुच्चो जस्तै गरी दिन लामो हुँदै जान्छ भन्ने संकेतका लागि बनाउने गरिएको बताउँछन् ।
यही तर्कमा जोड दिँदै नेवारी संस्कृतिका जानकार डा. विनोदराज शर्मा योमरी पुन्हीलाई धान्य लक्ष्मीको आराधनाको पर्व मान्छन् ।
उनका अनुसार नेवार समुदायले पूर्णिमाको दिनमा कुठी (भकारी जस्तै धान राख्ने ठाउँ) भित्र योमरी राखेर पूजा गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय कुठी प्राप्त गर्न कठिन भएका कारण धानको थुप्रो लगाएर योमरीले पूजा गर्ने चलन छ ।
त्यसको पनि आ-आफ्नो परम्परा अनुसारको विधिविधान हुन्छ । कसैले पिचा (भोजमा चिउरा राख्ने भाँडो, ढकी जस्तै)मा राखेर पूजा गर्ने चलन पनि रहेको शर्मा बताउँछन् । धेरैले भने धान्य लक्ष्मीको मूर्ति बनाएरै पूजा गर्ने गरेको शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार योमरीको पनि छुट्टै आकार हुन्छ । कुनै योमरीको आकार चेप्टो खालको हुन्छ भने कुनै गोलो आकारको हुन्छ तर त्यसमा हुने चुच्चोले भने लम्बिँदो दिनलाई संकेत गर्ने गरेको शर्मा बताउँछन् ।